Februwari 2021: Okuhle, okubi nokuthakazelisa kwe-Free Software | Kusuka kuLinux
Februwari 2021: Okuhle, okubi nokuthakazelisa kweSoftware yamahhala
Ngalolu suku lokugcina lukaFebhuwari 2021, siyethemba ukuthi i- umphakathi omkhulu futhi okhulayo womhlaba jikelele yabafundi nezivakashi kudlule kuze kube namuhla, umuntu ojabulayo, ochumayo, onempilo, ophumelelayo futhi obusisiwe isikhathi, ngenkathi sijabulela konke okwethu izindaba ezifundisayo nezobuchwepheshe esikunikele ngokuhlobene ne- Isoftware yamahhala, Umthombo Ovulekile kanye ne-GNU / Linux, ikakhulukazi.
Futhi njengenjwayelo, namuhla kufayela le- Ibhulogi KusukaLinux siletha lokhu okuncane resumen, kokunye kakhulu izincwadi ezifakiwe yenyanga, okuwukuthi, izindaba ezifanele kakhulu, okokufundisa, amabhukwana kanye nemihlahlandlela yesikhathi samanje esiphela.
1 Isifinyezo sikaFebhuwari 2021
1.1.4 Okunye okuthunyelwe okunconyiwe ngoFebhuwari 2021
1.2.1 NgoFebhuwari 2021 Ukukhishwa kwe-Distros
Isifinyezo se- Februwari 2021
I-DVDStyler: Uhlelo lokusebenza lwamahhala nolwesikhulumi sokudala kanye nokugunyazwa kwe-DVD
Ulimi lokugqwala: Abathuthukisi balo bamemezela inguqulo entsha 1.50.0
Ama-greats amabili alungele ukubhekana futhi umklomelo idatha yethu
I-Kobalos, i-malware eyeba iziqinisekiso ze-SSH ku-Linux, BSD naseSolaris
Ukubheja ngomthombo ovulekile kusho ukuyeka amandla okulawula ukuxhashazwa kwezentengiselwano
I-OWASP ne-OSINT: Okuningi ku-cybersecurity, ubumfihlo nokungaziwa
Okunye okuthunyelwe okunconyiwe kusuka ku- Februwari 2021
Ukugenca Ngokuziphatha: Izicelo zamahhala nezivuliwe ze-GNU / Linux Distro yakho. (Bheka)
I-Rexuiz, i-Trepidaton ne-Smokin 'Guns: Imidlalo Engaphezulu ye-3 ye-FPS ye-GNU / Linux. (Bheka)
Umthombo Ovulekile weGAFAM: Ama-Giant Technological asekela uMthombo Ovulekile. (Bheka)
Ukushayeka kukaDogecoin, kwehla ngama-23% njengoba u-Elon Musk egxeka ukufakwa kuhlu kwe-DOGE. (Bheka)
IPluto TV: izoqala ukukhombisa iziteshi ezinhlanu zamahhala ezintsha. (Bheka)
Ukuhlaselwa kokuthembela kuvumela ukwenziwa kwekhodi ku-PayPal, Microsoft, Apple, Netflix, Uber nezinye izinkampani ezingama-30. (Bheka)
NgoFebhuwari 2021 Ukukhishwa kwe-Distros
I-Mageia 8: 2021-02-26
IKali Linux 2021.1: 2021-02-24
IGeckoLinux 999.210221: 2021-02-22
I-FreeBSD 13.0-BETA3: 2021-02-21
INetrunner 21.01: 2021-02-20
IMabox Linux 21.02: 2021-02-20
i-pfSense 2.5.0: 2021-02-17
I-Tiny Core Linux 12.0: 2021-02-17
I-Q4OS 3.14: 2021-02-16
I-Slackware Linux 15.0 Alpha 1: 2021-02-16
IDevuan GNU + Linux 3.1.0: 2021-02-15
ISiduction 21.1.0: 2021-02-15
I-FreeBSD 13.0-BETA2: 2021-02-13
I-OpenMandriva Lx 4.2: 2021-02-13
I-Finnix 122: 2021-02-09
I-PCLinuxOS 2021.02: 2021-02-07
IMageia 8 RC: 2021-02-06
Zama i-iOS 2021.02.03: 2021-02-03
Solus 4.2: 2021-02-03
Ukuze uthole okwengeziwe ngalokhu kukhishwa, chofoza kokulandelayo isixhumanisi.
03/02/2021 - Siyabonga ngokuseseka kwakho okukhulu njengoba siqhubekisela phambili inkululeko: Lyena iFree Software Foundation (FSF) uyiqede ngokusemthethweni imikhankaso yabo yobulungu yaminyaka yonke ngoJanuwari 18, ngamalungu amasha angama-487 kwangu-500 ayenethemba lokuyithola. Kodwa-ke, baqhubekile nokuthola ukubhaliswa kwamalungu amasha ngeposi. Ngakho-ke bacabanga ukuthi bafinyelele enhlosweni yabo yamalungu amasha we-500. Futhi ngenxa yalesi sizathu, banethemba lokuqhubeka nokuba sesimweni esinamandla sokwenza umsebenzi wabo ngo-2021. (Bheka)
10/20/2021 - Bungaza usuku lwamahhala lwesoftware ngoFebhuwari 14 ngokuhlala uxhumekile: Njengoba kunikezwe ukuthi amathuluzi okuxhumana anobuciko ahlinzekwa yiFree Software, Open Source ne-GNU / Linux awaveli nezibopho, okusho ukuthi, ayisipho esilula nesiphelele, esabiwe ngokuzinikela okuphelele kokupha nokuhlonipha; IFree Software Foundation Europe (FSFE) ikhethe indikimba ethi 'ukuhlala uxhumekile' ngomgubho wayo wosuku lweFree Software Love Day, owenzeka minyaka yonke ngoFebhuwari 14, uSuku Lwezithandani, futhi sifuna! Ukuthi wabelane ngothando! (Bheka)
11/02/2021 - ILibrePlanet, ingqungquthela eyinhloko yeFree Software emhlabeni, isondela: IFree Software Foundation yazisa ukuthi, emcimbini olandelayo weLibrePlanet, kuhlelwa izinsuku ezimbili ezinhle zezingxoxo, nezikhulumi ezingaphezu kwamashumi amane ezivela emhlabeni wonke, ngoMashi 20 no-21, 2021, yingakho zidinga usizo lwamaVolontiya njengoba mkhulu umsebenzi okumele wenziwe futhi ukubamba iqhaza kwamavolontiya kuhlala kubalulekile ekuphumeleleni komcimbi. Babika ukuthi, kunemisebenzi emibili emikhulu okudingeka bayenze namaVolontiya futhi yilena: Ama-Room Monitors nama-IRC Moderators ne-Voice Chat. (Bheka)
01/02/2021 - I-OSI nabangane bayo ku-FOSDEM ebonakalayo: I-FOSDEM umcimbi womphakathi wamahhala futhi ovulekile othuthele kwi-Intanethi ngonyaka wayo wama-21. Umcimbi walo nyaka uzohluka kancane, kepha okuhle wukuthi unenketho yokubamba iqhaza ekhaya, ngaphandle kwesidingo sokuhamba. Izinkulumo zalo nyaka zonke zibhalwe phansi, futhi izikhulumi zizobe ziku-inthanethi ukuphendula imibuzo ngemuva nje kokusakazwa kokuqala. Uma ufuna ukubamba iqhaza engxoxweni ebukhoma, kuzofanela ujoyine ingqungquthela ngesikhathi sangempela. (Bheka)
04/20/2021 - Ukuvela kwe-OSI njengendawo yokusebenzaI-OSI ibika ukuthi ngenxa yokukhula kwayo okukhulu eminyakeni yamuva nje, isekuhlelweni kabusha, lapho ifuna ukuzibona khona futhi ibe yinhlangano efana nezinye ezisemthethweni nezakhiwe, okusho ukuthi, njengendawo yokusebenzela enhle nenempilo, lapho abasebenzi bakho ube nemisebenzi yansuku zonke futhi ungaphumelela ungakhathali. Ngakho-ke banesifiso sokusuka kumuntu osebenza ngokugcwele aye kwababili noma ngisho nabasebenza ngokugcwele eminyakeni embalwa ezayo. (Bheka)
09/02/2021 - Ukuvuselelwa kwesitatimende semishini yethuI-OSI ibika ukuthi baphinde basebenzisa isitatimende sabo semishini, okusho ukuthi yize izinhloso zabo ezinkulu zingaguquki, imisebenzi yabo yesikhathi esizayo izogxila kakhulu ekuvunyelweni kwelayisense. Bazohlala bengabaphathi bencazelo yomthombo ovulekile (Incazelo yomthombo ovulekile - OSD), kepha bazobheka nezinye izindlela zokuxhasa, ukukhulisa nokugcina imithombo evulekile yemvelo. (Bheka)
Njengenjwayelo, siyethemba lokhu "isifinyezo esincane esisebenzisekayo" ngamaphuzu avelele ngaphakathi nangaphandle kwebhulogi «DesdeLinux» ngenyanga ka «Febrero» kusuka ngonyaka we-2021, yiba nentshisekelo nokusetshenziswa okuhle, kwayo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwesimangaliso semvelo, esikhulu futhi esikhulayo sokusebenzisa kanye nokwenzelwe «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Februwari 2021: Okuhle, okubi nokuthakazelisa kweSoftware yamahhala
Inguqulo entsha yeFirefox 86 isivele ikhishiwe futhi yethula ukuvikelwa okuphelele kuma-cookies
I-Docker vs Kubernetes: izinzuzo nezinkinga